Mali iyo Niger waxay ugaarsadaan dalxiisayaasha la afduubay ee Saxaraha
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Newsletter » Mali iyo Niger waxay ugaarsadaan dalxiisayaasha la afduubay ee Saxaraha
BAMAKO – Ciidamada ammaanka ee ka kala socda Mali iyo Niger ayaa ku baaraya xadka ay wadaagaan afar qof oo reer Yurub ah oo la afduubay balse wali ma muuqato calaamada dalxiisayaasha, sida ay sheegeen saraakiisha labada dal.
Labo nin oo u kala dhashay Swiss-ka, Jarmal iyo Ingiriis ayaa khamiistii kooxo hubeysan ay ka afduubteen deegaan saxaraha fog ee dalka Mali halkaas oo ay ka howlgalaan ururo ay ka mid yihiin fallaago, burcad iyo Islaamiyiin, hal bil uun ka dib markii dublamaasi Canadian ah Robert Fowler iyo kaaliyihiisii ​​lagu waayay dalka Niger.
Maali ayaa markii hore ku eedaysay fallaagada Tuareg inay ka dambeeyeen afduubkii Khamiistii, balse sarkaal ka tirsan milateriga Mali ayaa sheegay in weerarku aanu lahayn mid ka mid ah astaamaha Ibrahima Bahanga, oo ka mid ah hoggaamiyeyaasha fallaagada Tuareg ee ugu firfircoon.
"Ma ahan qaabka Bahanga in la afduubo dalxiisayaasha ama in laga tago baabuurta," ayuu yidhi. "Qaabka ayaa u eg kii qof kasta oo dadka Kanadiyaanka ah ku afduubtay Niger," ayuu yidhi.
Afarta qof ee dalxiisayaasha Yurub u dhashay ayaa lagala gudbay xadka Niger, waxaana afduubtay kooxihii afduubtay, sida ay Mali sheegtay Jimcihii.
Diblumaasiyiinta ayaa walaac ka muujiyay in garabka waqooyiga Afrika ee al-Qaacida ay ka faa’ideystaan ​​sharci darada ka jirta deegaanka si ay u fuliyaan ama uga faa’iideystaan ​​afduubka.
Saraakiisha Niger ayaa horaantii bishaan sheegay in "kooxaha Islaamiyiinta hubaysan" laga yaabo inay hayaan Fowler.
"Tani ma ahan markii ugu horeysay oo burcad hubeysan ay dad ku afduubtaan Mali ama Niger, marka waxaan ka wada shaqeyneynaa sidii aan u heli lahayn dambiilayaasha," ayuu yiri sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Niger, kaasoo sidoo kale dhacdada Khamiista la barbar dhigay afduubkii Fowler.
Afduubka loo geystay afartan dalxiise ee ka qayb galayay xaflad dhaqameedka Tuareg, ayaa ahayd dhacdadii ugu xumayd ee Mali ka dhacda tan iyo markii koox Islaami ah ay 32 dalxiisayaal Yurub ah ku qafaasheen Saxaraha sannadkii 2003, qaarkoodna ay haysteen muddo lix bilood ah.
Bishii Oktoobar ee la soo dhaafay, laba fasax oo Austrian ah ayaa lagu sii daayay Mali ka dib markii ay muddo bilo ah ku haysteen Saxaaraha dagaalyahanno Islaami ah.
Maya waxay burburisay goob dalxiis oo kulul
Tower Eiffel oo dalxiisayaashu weligood arkin
Guurka Australia? Ka gudbida...